Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Isniin Ah 20 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo isniin Ah 20 June
June 20, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Tottenham ayaa rajaynaysa in ay kooxda ay ku xafiiltamaan waqooyiga London ee Arsenal tartanka loogu jiro 25 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus kaas oo u soo bandhigaya tartanka Champions League. Mirror
Leeds United ayaa la soo xiriirtay kooxda Wolves si ay uga heshiiyaan xiddiga garabka uga ciyaara xulka qaranka Spain ee Adama Traore oo 26 jir ah. Insider
Kooxda Barcelona ayaa todobaadkan la kulmi doonta kooxda Bayern Munich si ay u dhamaystirto saxiixa weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski oo 33 jir ah Sport.
Weeraryahanka Manchester City iyo xulka England Raheem Sterling, oo 27 jir ah, ayaa dadka wax ka weydiiyay nolosha galbeedka London iyadoo ay xiiseynayaan Chelsea . Sports
Dalabkii ugu horeeyay ee Chelsea oo £21.5m ku dooneysa Sterling waa la diiday. Fabrizio Romano
Chelsea ayaa sidoo kale laga yaabaa inay Manchester City wax ka weydiiso 27 jirka daafaca uga ciyaara Netherlands Nathan Ake. Telegraph
Weeraryahanka Chelsea iyo Belgium Romelu Lukaku, oo 29 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu dib ugu laabto Inter Milan isagoo 8.5 milyan ginni amaah ah oo ay kooxuhu ku heshiiyeen. Mail
Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay dalab cusub ka gudbiso 25 jirka khadka dhexe ee Barcelona iyo Netherlands Frenkie de Jong. Fabrizio Romano
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Wolves iyo Portugal Ruben Neves, 25, ayaa ku jira liiska xulashooyinka suurtagalka ah ee United haddii ay ku guuldareystaan ​​saxiixa De Jong. Fabrizio Romano
Newcastle iyo Leeds ayaa lala xiriirinayay daafaca Burnley Nathan Collins laakiin Wolves iyo Leicester ayaa la filayaa inay dalab u diraan daafaca Republic of Ireland, 21, usbuucan. Sun
Newcastle ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto daafaca Ivory Coast Eric Bailly, oo 28 jir ah, kana tirsan Manchester United . Mirror
Magpies ayaa sidoo kale loo sheegay inay ku qasban yihiin inay bixiyaan 50 milyan ginni si ay ula soo saxiixdaan 22 jirka Bayer Leverkusen iyo garabka France Moussa Diaby. Sun
Xiddiga Portugal Cristiano Ronaldo, oo 37 jir ah, ayaa soo dhaweeyay raadinta Manchester United ee ku aadan saxiixa weeraryahan cusub. Express
Tababaraha Netherlands iyo tababarihii hore ee Manchester United Louis van Gaal ayaa qeyb ka qaatay joojinta daafaca Ajax ee Netherlands Jurrien Timber, oo 21 jir ah inuu u dhaqaaqo Old Trafford. Sky Sports
Wakiilka xiddiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea iyo xulka qaranka England ee Ruben Loftus-Cheek ayaa sheegay in tababarihii hore ee Blues ee Maurizio Sarri uu xiisaynayo in uu 26 jirkan u saxiixo kooxda Lazio . Metro
Liverpool ayaa tartan kala kulmi karta Manchester United isku dayga ay kula soo saxiixaneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Jude Bellingham, oo 18 jir ah, kana tirsan Borussia Dortmund xagaaga soo aadan. Express
Ajax ayaa diyaarisay 40 milyan euro (£34.3m) oo ay ku doonayso Sebastien Haller, iyadoo Dortmund ay xiiseyneyso 27 jirka reer Ivory Coast. 90 min
Aberdeen ayaa ku dhiiraday xiisaha Lewis Ferguson ka dib markii Millwall uu furay dalabka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Scotland, oo 22 jir ah, isagoo u soo bandhigay 1.5 milyan ginni. Times, subscription required
Sunderland , Huddersfield iyo Bristol City ayaa dalab 1 milyan ginni iyo dheeraad ah ka gudbiyay 21 jirka khadka dhexe ee AFC Wimbledon Jack Rudoni. Sun